MALUNGA US - Shenzhen Alphagreen vape Co., Ltd.
I-Shenzhen Alphagreen vape Co., Ltd eyasekwa ngo-2018 eyimveliso ekhethekileyo kwezophando, uphuhliso kunye nemveliso yeVape Hardware. SiseShenzhen, kunye nokufikelela okulula kokuhamba. Zonke iimveliso zethu zithobela imigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya kwaye zixatyiswa kakhulu kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.
Sinabasebenzi abangaphezu kwama-50, inani lokuthengisa lonyaka elingaphezulu kwe-USD 24 yezigidi. Amaziko ethu axhotyiswe kakuhle kunye nolawulo olukumgangatho ophezulu kuwo onke amabakala emveliso asenza sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi.
Ngenxa yeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo yabathengi emi ngaphandle, sizuze inethiwekhi yentengiso yehlabathi efikelela eMntla Melika naseYurophu.
Siliqela elinamandla, elisencinci nelinamabhongo.
Injongo yethu kukuba “Cinga ngokuKhulu, ugqweshe.” Zifunxa izimvo ezintsha, ngokungqongqo ulawulo lomgangatho, inkonzo yokulandela umkhondo wemveliso ebanzi. Sithanda ukwakha imeko yokuphumelela kunye nokwenza ikamva eliqaqambileyo
Siphatha wonke umthengi ngehlombe lethu nangokunyaniseka, ujonge wonke umthengi njengomhlobo wethu othandekayo.
Sizimisele ukusebenzisa izinto ezisemgangathweni ophezulu zokuvelisa iimveliso zethu, iikhatriji ezingama-300k kunye neepeni ezingama-200k ezilahlwayo ngenyanga, uhlala ufumana ingxelo elungileyo evela kubathengi.
Vavanya izixhobo zethu
© Copyright - 2010-2021: Onke amalungelo agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, ipeni ye-cbd vape, ipeni ibhetri vape, ezilahlwayo vape usiba, ipeni yevape egcwalisekayo, CBD oyile vape ezilahlwayo, 510 ibhetri, Zonke iiMveliso